Arag Sawirrada: Sanad guuradii 20-aad Damul Jadiid oo la xusay. - Caasimada Online
Home Warar Arag Sawirrada: Sanad guuradii 20-aad Damul Jadiid oo la xusay.
Arag Sawirrada: Sanad guuradii 20-aad Damul Jadiid oo la xusay.
Xaflad loogu dabaal degayay Sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay Markii la Aasaasay Ururka Islaamiga (Damul Jadiid) ayaa lagu qabtay Magaalda khartuum.
Xafladan oo si heersare ah loosoo agaasimay ayaa lagu maamusayay Sanad Guuradii 20-aad ee kasoo wareegata Markii la yagleelay Xarakada Ismaaliga ah Al-Islaax (Damul Jadiid), taasi oo ay kasoo qeyb galeen Jaaliyada Soomalieed ee kusugan dalka sudan, Arday, aqoonyahano, Macalimiin, Waxgarad, Saxafiyiin iyo Masuuliyiinta sar sare ee Safaarada Soomaalida ay ku leedahay Magaalada Khartuum ee Xarunta Dalka Suudaan.
Kooxda Damul Jadiid, waa kooxda uu ka tirsan yahay madaxweynaha Somalia Xasan Sheikh Maxamuud.